Uyifaka njani iShower yangaphandle - Into ekufuneka uyazi malunga neMiboniso yangaphandle - Iingcebiso Zomyili
Uyifaka njani iShower yangaphandle - Into ekufuneka uyazi malunga neMiboniso yangaphandle
UMFANEKISO: SHANNON MCGRATH; UYILO: URobson Rak
Ukucwenga ulusu ecaleni, ayikho enye into evuselelayo njengokuhlamba emva kwendlu. Nangona Iishawa zangaphandle unokuba nedumela lokuba ubiza (mhlawumbi nokuba ugqithisile) ubunewunewu, lutyalo-mali olukhulu, olunokubangela ukwanda kwexabiso lekhaya lakho. Ngokwe-2018 ingxelo evela realtor.com , amakhaya aneeshawari zangaphandle adla ngokudwelisa phantse ixabiso eliphindwe kabini lokubuza kwamanye amakhaya, ke ukongeza enye kungenza ingqiqo yezemali. Umyili wangaphakathi UPalmer Weiss wayeneshawa yangaphandle efakwe eSonoma, eCalifornia, ekhaya, kwaye nosapho lusebenzisa unyaka wonke. Asinayo neshawa ngaphakathi ibhafu enkulu , uyavuma, kwaye kwiminyaka emine, andikaze ndizisole ngesi sigqibo. Uqinisekile ukuba ufuna enye ngoku? Qhubeka ufunda yonke into oyifunayo ngaphambi kokuba uqalise.
Zibuze xa uza kuyisebenzisa
UMFANEKISO: PATRICK CLINE; Uyilo: Palmer Weiss
Izinto zokuqala kuqala, uyilo lomhlaba UDouglas Clark ithi 'sayisha ishawa ukuze kube lula.' Uyakukhuthaza ukuba uzibuze: 'Ngaba uyahlamba iinyawo ezinodaka kwaye uhlamba inja yakho? Ngaba uyaphola emva kokuhamba elwandle? Okanye uyayicoca emva kokuntywila ngokukhawuleza echibini? ' Yonke le mibuzo iza kukunceda ubone ukuba luhlobo luni lokuhlambela ngaphandle oya kuthi ulwakhe ukulungiselela ezo mfuno.
Yinyani Ngokumalunga nemibhobho yamanzi
Ukufakwa kwemibhobho elula kunokuqhuba malunga ne- $ 1,500, utsho UDan DiClerico woMcebisi weKhaya . Kodwa iyahluka kakhulu ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nokuba ikhaya lakho sele lixhotyisiwe. Umgaqo wesithupha ubonakala ngathi ukusondela kweshawa kwindlu, kuya kuba lula ukuseta imibhobho efanelekileyo. Ewe, umyili ngamnye kunye nomgcini welizwe esithethe naye sincoma kakhulu ukubeka ishawa yakho ecaleni kwendlu kuba oku kunika ukufikelela okulula kwimigca yamanzi ashushu nabandayo.
UMFANEKISO: Tessa Neustadt; Uyilo: Alexander DB
Kwaye ungalibali amanzi. Yonke ishawa ifuna idreyini! Utsho uClark-kungenjalo uya kuba nengxaki yezikhukula kunye neentloni. ' Ummandla ngamnye unemigaqo eyahlukileyo malunga nokuchaphazela imibhobho yamanzi ngaphandle, ngenxa yoko uClark uthi uyakufuna 'ukudibanisa neentloni iikhowudi zalapha ekhaya ukumisela ukuba ufuna ukumba eyiyo na okanye unokujika nje uye egadini.'
Enye ingcebiso? 'Sinesiciko seplastikhi ngokuthe ngqo phezu komsele esigcina inkunkuma enkulu ngaphandle kodwa efuna ukuhoywa ngamanye amaxesha,' wongeza uWeiss. Olu luvo olulungileyo kwimvula yangaphakathi, nayo.
Khetha izinto ezifanelekileyo
Xa kufikwa kufakelo, imithetho yasensimbi engenasici engenasinxibo xa kufikwa kumalungiselelo angaphandle, utshilo uClark, esithi ukongeza kokujikeleza komoya kunye nokukhanya kwelanga kuya kunceda ukuthintela ukungunda (ke ukufikelela elangeni kufuneka kukwazise indawo). Umyili waseCalifornia uVanessa Alexander we Uyilo luka-Alexander iyangqinelana neli nqaku kwaye icebise ukusebenzisa izixhobo 'zomgubo wothambile, ongenazingcingo, okanye i-chrome ngaphandle. Sithanda ukusebenzisa ubumnyama okanye ubhedu obugqityiweyo ixesha elininzi, nangona ubhedu bunokubonakala buhle kwindawo elungileyo eluhlaza. '
UMFANEKISO: SAM FROST; Uyilo: Alexander DB
Kwaye ngoku iinyawo zakho, zama i-slats zokhuni. Ngokungafaniyo nelitye, ii-slats zomthi azenzi mngundo kwaye zityibilike kuba zivumela amanzi ukuba adlule, utshilo umyili wezakhiwo uEdmund D. Hollander Uyilo lweHollander . Kuya kufuneka umbe malunga neenyawo ezimbini phantsi komgangatho kwaye ubeke umhlaba oyisanti wokuhambisa amanzi.
iintyatyambo zelanga elipheleleyo
Iindaba ezimnandi zezokuba, 'kuba ngokwendalo yabo, iishawa zangaphandle aziqhelekanga, awudingi kuchitha imali eninzi. Indalo ngumboniso wokwenene apha kwaye awudingi ntsimbi zininzi kunye nemlozi ukuze uzive ukhethekile, 'u-Weiss uyachaza. Oko kuthethiweyo, uya kufuna ukugcina izinto ezimbalwa ezinxulumene nesitayile engqondweni ngelixa usakha ishawa yakho yangaphandle.
Cinga ngoKhuseleko kunye nokuthuthuzela
Nje ukuba ufumane izinto ezinobunkunkqele endleleni, lixesha lokuba ucinge ngenxalenye yolonwabo: Uhlobo. Kwimfihlo eyongeziweyo, unokwakha indawo ebiyelweyo eqinileyo. U-Hollander ucebisa ukuba kwakhiwe iindonga ezifikelela kwiimitha ezintlanu ngaphezulu komhlaba. Izikrini zomthi ezisikiweyo kunye neendonga zomhlanga zezinye iindlela ezilungileyo uAlexander azithandayo.
UMFANEKISO: UCharles Mayer; Uyilo: Uyilo lweNdawo yeHollander
Okanye, unokuyila kwaye wenze ubuxoki bendalo babucala ngodonga lweentyatyambo. Iintyatyambo eziqhakazayo ezinje ngehydrangeas (okanye izityalo ezingakhathaliyo ukufuma) zinokusebenza njengodonga lokuhlambela (kwaye zihlala zingabizi). UClark ucebisa ngokuthena amasebe ukuze ilanga lifudumale ukuze lingene ngaphakathi. Kwaye ke jonga izinto ezinje ngeebhentshi iishelufa ezakhelweyo zokugcina kunye nokuhlala, kunye namagwegwe eludongeni ukuze iitawuli zakho zome emva kwawo.
Yiba Nobubele Kwimo Engqongileyo
Xa usakha ishawa yangaphandle, kubalulekile ukuba uqwalasele indlela oza kuyichaphazela ngayo imeko-bume yakho. Njengoko uClark echazayo, isixa esikhulu samanzi esibalekayo sinokuba nefuthe elibi ukuba abaninimzi abayisebenzisi isepha yendalo nangaphandle. ' Usikhumbuza ukuba 'ukudibana nengcali ukufakela amanzi afanelekileyo' kubalulekile.
ULauren Stephanie Wells
Ukuba ulapho une-shampoo, ukuhlamba umzimba, nayo nayiphi na into oyisebenzisayo xa uhlamba, uyayidinga ukuze ungene kwinkqubo yakho yokuhambisa amanzi ngenxa yokuba uzakusebenzisa isixa esifanelekileyo samanzi (ngaphezulu kokucoca ngokukhawuleza isuti yakho yokuhlamba, nokuba kunjalo). Eyona nto intle ukuyenza ukukhusela iibhedi zeentyatyambo ezingqongileyo kunye nokusingqongileyo ngokubanzi kukhetha iisepha kunye nezinto eziboniswayo.
Ngaba awufuni ukubiza ikontrakta? Khetha ishawa esizimeleyo esihombisa ukuya kumyezo wakho wegadi. Kuyavunywa, oku kuya kukunika kwaphela ulawulo lobushushu. Kodwa c'mon, imvula ebandayo ilungile emphefumlweni! Kwaye yeyona ndlela ifikelelekayo kwaye iyahlaziya ehlotyeni.
Ukuhlamba inkcubeko yokuhlamba umzimba ($ 20) THENGA NGOKU
Iseletti Aquart Shower yangaphandle ($ 330) THENGA NGOKU
U-Eric Trine Bent Hotdog Hook ($ 22) THENGA NGOKU
Itawuli yaseMissoni Giacomo yeBhafu ($ 180) THENGA NGOKU
Coca isitofu setop
alele njani onke amantombazana
Indlu yenqina le paw iyathengiswa